19 degre Janoary 2, 2020 any Norvezy | Apg29
Fiakaran'ny mari-panan'ny no antony iray, araka ny mpikaroka.
Climate Erik Kolstad mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Berge nanondro fiakaran'ny mari-panan'ny ho toy ny antony ny ririnina any Norvezy Miha mafana.
18.6 ihany degre in Åndalsnes ny alakamisy maraina, ary mifaly vaovao ho an'ny Janoary any Norvezy. Saingy naharitra adiny iray monja.
Mandritra ny ora vitsivitsy taty aoriana, dia firaketana an-tsoratra vaovao indray dia 19 degre refesina in Sunndalsøra , Mil vitsivitsy avaratra atsinanan'i Åndalsnes.
Climate Erik Kolstad mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Berge nanondro fiakaran'ny mari-panan'ny ho toy ny antony ny ririnina any Norvezy Miha mafana .
Any Soeda, dia lasa mafana. Snow tsipika mitsangana ambony dia ambony ao amin'ny firenena isan-taona.
Ny ho velona amin'ny faritra avo ny Småland. Eto dia mety ho be dia be ny oram-panala, fa amin'izao fotoana izao, ny 2 Janoary, 2020, no hany bozaka maitso.
Tsy fantatro hoe nahoana izany, fa zavatra iray loha no fantatro azo antoka: izany famantarana ny fotoana. Kanefa dia tsy tokony hohadinointsika mihitsy fa raha mbola eto an-tany mbola tsy tapitra ny fotoana.
1 Genesisy 8:22: "Raha mbola maharitra koa ny tany, ny famafazana sy ny fijinjana, ny hatsiaka sy ny hafanana, ny fahavaratra sy ny ririnina, ary ny andro sy ny alina."
Be dia be eo amin'ny tontolo misy antsika amin'izao fotoana izao amin'ny lafiny rehetra. Ara-politika, fivavahana, ara-toekarena, fitondran-tena ... Tsy maintsy manana ny zava-drehetra vonona tamin'i Jesosy, satria tsy ho ela dia hitondra an-trano ireo izay mino Azy.
Raha toa ka mbola tsy nandray an'i Jesosy ho Tompo mila anao hanao izany izao. Avy eo dia hovonjena ka ho azo antoka mandrakizay, na inona na inona mitranga.